စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ဝါသနာများ: February 2015
ခပ်မွမွ ခပ်ရွရွလေးမို့ စားပြီးရင်း ထပ်စားချင်အောင် ဖြစ်မဲ့အကြော်လေးပါ ထမင်းပူပူလေးနဲ့လိုက်သလို ဒီအတိုင်းလေးလဲ စားလို့ကောင်းပါတယ် ကြော်ရတာလဲလွယ်တာမို့ ကြော်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကြက်သားပြားကြော်လေး ကြော်ဖို့အတွက် ပါဝင်တာလေးတွေ ပြောပါမယ်
ကြက်ရင်ပုံသား - 200g
တန်ပူရာမှုန့် - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တလုံး
ကြက်သားကိုရေဆေးပြီး ရေခြောက်အောင် သုတ်ပေးပြီး ခပ်ပါးပါး အချပ်လေးတွေလှီးပါ
ဆား အရသာမှုန့်တို့နဲ့ ကြက်သားကိုနယ်ပေးပါ
ကြက်ဥ တန်ပူရာမှုန့်နှင့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့နဲ့ရောပြီး ခလောက်ပေးပါ
ခလောက်ထားသော တန်ပူရာမုန့်အနှစ်ထဲမှာ ကြက်သားပြားကို တပြားချင်းနှစ်ပြီး လူးပေးပါ
ဆီကို အပူပေးပြီး ဆီပူလာတာနဲ့ မီးကိုအနေတော် လျှော့ပေးပြီးမှ ကြက်သားပြားကို ထည့်ကြော်ပေးပါ
ကြက်သားပြား တခုလုံး ရွှေဝါရောင်ဖြစ်လာပါက ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက ကြက်သားပြား မွမွရွရွ ကြွတ်ကြွတ်လေးကို အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ
Posted by Tuumar at 12:16 pm5comments:
ကြော်စားဖြစ်တဲ့ ပုဇွန်ကြော်လေးပါ ပုဇွန်ကို ပေါင်မုန့်ခြောက်မှုန့်နဲ့ကပ်ပြီး ကြော်ထားတာမို့ အရသာမွှေးမွှေးလေးနဲ့ စာလို့ကောင်းပါတယ် အားလပ်ရက်လေးမှာ ကြော်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ပုဇွန်ကြော်လေးအတွက် ပါဝင်ရမှာလေးတွေ ပြောပါမယ်
ပုဇွန်ထုတ် - အကောင်ကြီးကြီး 350g
Bread Crumbs. - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တလုံးမောက်မောက်
ကြက်ဥ. - တလုံး
ပုဇွန်ကိုရေဆေးပြီး အမြီှးကိုချန်ထားပြီး အခွံချွတ်ကာ ခေါင်းကိုဖြုတ်ပေးပါ
ပုဇွန်ကြောကို ခွဲပြီးအမဲကြောင်းထုတ်ပေးကာ ဆားအရသာမှုန့်တို့နယ်ထားပေးပါ
ပုဇွန်အရသာနယ်ကို ကြက်ဥအနှစ်ထဲ တကောင်ချင်းထည့်ပြီး နှစ်ပေးပါ
ကြက်ဥအနှစ် စိမ်ပြီးတာနဲ့ bread crumbs မှုန့်ထဲ လူးပေးပါ
ဆီကိုမီးအပူပေးပြီး ဆီပူလာတာနဲ့ မီးကို အနေတော် လျှော့လိုက်ပြီး ပုဇွန်ကို တကောင်ချင်း ထည့်ကြော်ပေးပါ
တဖက်ရွှေဝါရောင်ဖြစ်လာပါက နောက်တဖက်ကို လှန်ပေးပြီး ရွှေဝါရောင်ဖြစ်အောင် ကြော်ပေးပါ
နှစ်ဖက်လုံး ရွှေဝါရောင်ဖြစ်ပါက ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဘာဆာငါးလေးကို ပေါင်မုန့်အမှုန့်ခြောက်ကပ်ပြီး ကြော်ထားပါတယ် ငါးကြီးသက်သက် စားရမဲ့အရသာကို အရသာလေး တမျိုးပြောင်းပြီး ကြော်လိုက်တာပါ ငါးထဲထည့်ထားတဲ့ အရသာအမှုန့်တွေကြောင့် အရသာကတော့ မွှေးမွှေးလေးမို့ ကြော်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ငါးအရသာမွှေးမွှေးလေး ကြော်ဖို့အတွက် ပါဝင်ရမှာလေးတွေ ပြောပါမယ်
ဘာဆာငါး - 250g
Lemon Pepper - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်သာသာ
Lemon Pepper မရှိပါက သံပုရာရည် ထမင်းစားဇွန်းတ၀က်နဲ့ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ်ကို ရောနယ်ပေးပါ
ဆီ - လက်ဖက်အကြမ်းပန်းကန် နှစ်လုံး
Panko bread crumbs - ထမင်းစားဇွန်း ၄ဇွန်းမောက်မောက်
ဘာဆာငါးကို ရေဆေးပြီး ရေခြောက်အောင် Paper Towel နှင့်ခပ်ဖွဖွ သုပ်ပေးပါ
ရေခြောက်သွားပါက ဆား အရသာမှုန့် lemon pepper တို့နဲ့အရသာဝင်အောင် ဆုတ်ဆုတ်ပြီး နယ်ပေးပါ
အရသာနယ်ပြီးပါက Panko bread crumbs မှုန့်နဲ့ ငါးမျက်နှာပြင် ၂ဖက်လုံးကို ဖြူးပြီး ခပ်ဖွဖွ လူးပေးပါ
အောက်ချေမကပ်သော ဒယ်အိုးတလုံးကို ဆီအပူပေးပြီး ဆီပူလာပါက ငါးကို ထည့်ကြော်ပေးပါ
တဖက်ရွှေဝါရောင် သန်းလာရင် နောက်တဖက်လှန်ပေးပြီး နောက်တဖက်ရွှေဝါရောင် သန်းလာပါက ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက ငါးကြော်မွှေးမွှေးလေးကို စားသုံးနိုင်ပါပြီ
Posted by Tuumar at 10:52 am No comments:
ဒီငါးပိချက်လေးကို ညီမငယ်လေး Thiri Win Shwe ချက်တာကြည့်ပြီး စားချင်တာနဲ့ ချက်နည်းလေးမေးပြီး ချက်ထားတာပါ ထမင်းကို တကယ်မိန်စေတဲ့ ငါးပိချက်လေးပါ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ချက်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ငါးပိချက် ချက်နည်းပေးတဲ့ ညီမလေးက မော်ဒယ်ဒီဇိုင်နာ တယောက်မို့ အလုပ်အရမ်းများပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ ငါးပိချက်ရဲ့ ရာဇ၀င်လေးတော့ အားနာတာနဲ့ မမေးရသေးပါဘူး ။
ဧရာဝတီငါးပိချက်အတွက် ပါဝင်တာလေးတွေ အရင်ပြောပါမယ်
ပုဇွန်ခြောက် - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တလုံး
ကြက်သွန်ဖြူ - ကြီးကြီး တဥ
မကျီးသီးမှည့် အနှစ် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းခွဲ
ပုဇွန်ငါးပိ -ထမင်းစားဇွန်း သုံးဇွန်းမောက်မောက်
ပုဇွန်ငပိကို ရေလက်ဖက်ရည်အကြမ်း ပန်းကန်လုံး တလုံးသာသာနှင့် ရေဖျော်ထားပါ
မကျီးသီးမှည့်အနှစ်ကိုလဲ ရေလက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန်းလုံး တလုံးသာသာနှင့် ရေဖျော်ထားပါ
ဆီကို မီးအနေတော်နဲ့ အပူပေးပြီး ဆီပူလာတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းကို မိနစ်ဝက်မရှိ တရှိကြော်ပေးပါ
ပုဇွန်ငါးပိ အရည်ဖျော်ကိုထည့်ပြီး မိနစ်ဝက်လောက်မွှေပေးပြီးမကျီးသီးမှည့် အရည်ဖျော်ကို ထည့်မွှေပေးပါ
ဟင်းအရည်များ ခမ်းလာပြီး ဆီမပြန်ခင် မီးပိတ်ပြီး ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ် ဧရာဝတီငါးပိချက်လေးနဲ့ ထမင်းမိန်မိန် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ
အချိုအရသာအတွက် ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်နှင့်ပုဇွန်ငါးပိပါတဲ့အတွက် အရသာမှုန့်မလိုပါ
အစပ်ကြောက်ပါက ငရုတ်သီးမှုန့် လျော့ထဲ့ပေးပါ။
ပုဇွန်ခြောက် ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်း ငပိရည်ဖျော် မွှေးမွှေးလေး
ငပိရည်ဖျော်လေးပါ မာမာက ငပိမပါရင် ထမင်းမစားတတ်သူမို့ ငပိရည်ကို နေ့စဉ်လိုလိုကျိုပါတယ် ဒီနေ့တော့ ပုဇွန်ခြောက်ကိုထောင်းပြီး ကြက်သွန်နီမီးဖုတ် ကြက်သွန်ဖြူအိုးပူတိုက် ငရုတ်သီးစိမ်းလှော်တို့နဲ့ထောင်းပြီး ငပိရည် မွှေးမွှေးလေး ဖျော်ထားပါတယ်။
ငပိရည်ကျိုနည်းလေးကတော့ အရင်တခါပြောပြီးသားမို့ ဒီတခါ အဖျော်အတွက် လိုတာလေးတွေ ပြောပါမယ်
ကျိုပြီးသားငပိရည် - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် အလတ်တလုံးစာ
ကြက်သွန်နီမီးဖုတ် - ခပ်ကြီးကြီး တဥ
လှော်ထားသော ငရုတ်သီးစိမ်း - အတောင့် ၂၀ခန့်
အိုးပူတိုက်ထားသော - ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီးကြီး ၆မွှာ
မညက်တညက် ထောင်းထားသော ပုဇွန်ခြောက် - လက်ဖက်ရည်အကြမ်း ပန်းကန် တလုံးနီးပါးခန့်
ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းသာသာ
အရသာမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်သာသာ( နှစ်သက်လျှင်ထည့်ပါ )
ကြက်သွန်နီကို မီးဖုတ်ပေးပါ မီးသွေးမီးဖိုမရှိလျှင် မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာ ၃မိနစ်စီ ၂ခါဖုတ်ပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကို အပြင်အသား နည်းနည်းကျွန်းတဲ့ထိ လှော်ပြီးမညက်တညက် ထောင်းပေးပါ
ပုဇွန်ခြောက်ကို မညက်တညက် ထောင်းပေးပါ
ကြက်သွန်နီ အပြင်ခွံကိုခွာကာ ရေဆေးပြီး ထောင်းပေးပါ
ပန်းကန်တလုံထဲမှာ ထောင်းထားသော အဖျော်များနှင့်ငရုတ်သီး အလှော်မှုန့်ထည့်ပြီး ကျိုထားသော ငပိရည်လောင်းထည့်ကာ သမအောင်မွှေပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
ခြံထွက် ရွှေဖရံညွန့်လေးရလို့ ဟင်းခါးပူပူလေး ချက်သောက်ဖြစ်ပါတယ် ဟင်းအရည်သောက်လေးပါမှ ထမင်းက မိန်တတ်တာမို့ ဒီနေ့တော့ ဟင်းခါးပူပူလေးနဲ့ စားပါမယ်။
ချက်နည်းလွယ်ကူပြီး သောက်လို့ကောင်းတဲ့ ဟင်းခါးချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်
အရင်ဆုံး ရွှေဖရုံညွန့်လေးတွေကို အကြောသင်ပေးပြီး အနေတော် ပိုင်းဖြတ်ပေးပါ
ပိုင်းဖြတ်ထားသော အညွန့်များကို ရေဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ
ပုဇွန်ခြောက် ၁၅ကောင်လောက်ကို ရေစိမ်ပြီး မညက်တညက် ထောင်းပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ ၄မွှာကို မညက်တညက် ထောင်းထားပါ
ငရုတ်ကောင်းအလှော် ၇စေ့လောက်ကို ညက်နေအောင် ထေားင်ထားပါ
အိုးတလုံးထဲတွင် ရေကို တရုတ်ဟင်းရည်သောက် ပန်းကန်၂လုံးစာထဲ့ပြီး တည်ပေးပါ
ရေထဲတွင် ထောင်းထားသော ပုဇွှန်ခြောက်မှုန့် ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း ကြက်သားမှုန့် . လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်သာသာထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပေးပါ
ရေဆူလာပါက ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ကိုရောထောင်းပြီး ဟင်းရည်အိုးထဲထည့်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ရွှေဖရုံညွန့်ကိုထည့်ပြီ နှစ်မိလောက် ဆူအောင်တည်ပေးပါ
ချက်ချင်းမစားဖြစ်သေးပါက ရွှေဖရုံညွန့် အရောင်မပြောင်းစေရန် ဇကာနှင့်အုပ်ထားပါ
မာမာ မနေ့ကချက်စားဖြစ်တဲ့ တို့ဟူးဟင်းလေးပါ သတ်သတ်လွတ် စားတဲ့သမီးလေးအတွက် ထူးရှယ်လေး ချက်ပေးထားတာပါ ချိုချဉ်ငံစပ်လေးမို့ သမီးလေး အရမ်းကြိုက်ပါတယ် မိတ်ဆွေတို့လဲ ချက်မယ်ဆို ချက်စားနိုင်အောင် မာမာ တို့ဟူးဟင်း ချက်နည်းလေး ပေးပါမယ်။
ပထမဆုံး တို့ဟူးကြိုနည်းလေး ပေးပါမယ်
ပဲအစိမ်းမှုန့် ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၅ဗူးကို ရေအေး ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၇ဗူးခွဲနဲ့စိမ်ပါမယ်
ပဲမှုန့်များကို ရေစိမ်ရာတွင် ခဲနေသောပဲမှုန့်များကို လက်နှင့်ချေပေးပါ
ပဲမှုန့်ရေစိမ်ချိန် ၆နာရီလောက် ကြာရပါမယ်
မကပ်သော အိုးဇောက်နက်နက် တလုံးကို မီးအပူပေးပါ
တို့ဟူးကျိုပြီး ထည့်ရန် စတီးဇလုံကို ဆီသုတ်ထားပေးပါ
အိုးပူလာပြီဆိုတာနဲ့ မီးကို အနေတော် အလယ်အလတ်လောက် ရောက်အောင် ရှော့လိုက်ပါ
အိုးထဲကို အရည်ဖျော်ထားသော ပဲအရည်ကြည်များ အရင်ဆုံးထည့်ပြီး ကျိုပါမယ်
ပဲအရည်ကြည် ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတပုံလောက် ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ
မွှေနေစဉ် ပဲရည်ကြည် ပျစ်လာတာနဲ့အနည်ထိုင်နေသော ပဲအနှစ်များကို ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ
ပဲအနှစ်မွှေနေချိန် နဲနဲလေးပြစ်လာတာနဲ့ဆီ ထမင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်းလောက် ပဲအနှစ်ထဲထည့်ပြီး မွှေပေးပါ
ပဲအနှစ်မွှေချိန် သိမ်မကြာပါဘူး ၁၀မိနစ်လောက်ဆိုရင် ရပါတယ်
ပဲရည်ပြစ်လာပြီး တော်တော်လေး ခဲလာပြီဆိုတာနဲ့ ဆီသုပ်ထားတဲ့ ပန်းကန်ထဲ လောင်းထဲ့ပေးပါ
နာရီဝက်လောက်ဆိုရင် ကောင်းကောင်း ခဲပါပြီ။
တို့ဟူးကို နှစ်သက်သလိုပုံစံ နည်းနည်းထူထူလှီးကာ တပွဲစာ ပြင်ထားပါ
ခရမ်းချဉ်သီး ခပ်ကြီးကြီး တလုံးကို ပါးပါးလှီးပါ
ငရုန်သီးစိမ် လေးတောင့်လောက်ကို ပါးပါးလှီးထားပါ
ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီးကြီး ၂မွှာကို ခပ်နုတ်နုတ်လှီးထားပါ
ကြက်သွန်မိတ်ကို လက်တဆစ်လောက် အရှယ်အရွယ် လှီးထားပါ
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်ပြင်ထားပါ
ပဲငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်ပြင်ထားပါ
အရသာမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်ပြင်ထားပါ
ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတပုံ ပြင်ထားပါ
ဆီ ထမင်းဝားဇွန်း နှစ်ဇွန်း ပြင်ထားပါ
တို့ဟူးချက်နည်းလေး တပွဲစာအတွက် ပြောပါမယ်
မကပ်သော ဒယ်အိုးတလုံးကို ဆီထည့်ပြီး အပူပေးပါ
ဆီပူလာပါက ကြက်သွန်အဖြူ အနီနှင့်ငရုတ်သီးမှုန့်တို့ကို ဆီသတ်ပါ
ဆီသတ်နံ့ သင်းလာတာနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးကျေအောင် ရေနည်းနည်း ထည့်မွှေပါ
ခရမ်းချဉ်သီး ကျေလာတာနဲ့ဆား အရသာမှုန့် ပဲငံပြာရည်နှင့် ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကို တမိနစ်လောက် ထည့်မွှေပေးပါ
ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် ပျစ်လာတာနဲ့တို့ဟူးကိုထည့်ပြီး မမွှေဘဲ အိုးကိုလှုပ်ပေးပြီး အရသာ သမအောင်လုပ်ပေးပါ
တမိနစ်လောက် တည်ပြီးတာနဲ့ ကြက်သွန်မိတ်ထဲ့ပြီး ချိုချဉ်ငံစပ် အရသာထူးတဲ့ တို့ဟူးဟင်း စားပွဲပြင်နိုင်ပါပြီ။
ဒီနေ့လုပ်စားဖြစ်တဲ့ကွတ်ကီးလေးတွေပါ မာမာ့သမီးလေးလုပ်တာပါ မာမာက မုန့်ရတာတော့တော်တော် လေးပျင်းတတ်ပါတယ် သူကျောင်းတဲ့ရက်တွေဆိုရင် စိတ်ကူးရရင်ရသလိုမုန့်လေးတွေမို့ မာမာ အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်တင်တာပါ သူလဲသူလုပ်တဲ့မုန့်လေးတွေအောင်မြင်ရင်ပျော်တာပေါ့နော်
မုန့်သားစလုပ်ကတည်းက ovenကို 280ဒီဂရီနဲ့ကြိုပြီးဖွင့်ပေးထားကာ
မုန့်သားပုံစံဖော်ပြီးပါက မုန့်ဖုတ်မည့်ဗန်းထဲသို့ baking paper ခင်း၍
မုန့်သားများကိုစီပြီးထဲ့ပေးပါ ပြီးမှ oven ထဲသို့ထဲ့ကာ မိနစ်နှစ်ဆယ်ဖုတ်
မာမာ ဒီနေ့တော့ မြန်မာမုန့်လေး စားချင်တာနဲ့မုန့်ကြာစေ့ လုပ်စားဖြစ်ပါတယ် မြန်မာပါးစပ်ဆိုတော့လဲ မြန်မာမုန့်လေးတွေကို စားချင်တာက အမြဲတမ်းလိုလိုပါ။
ဒီနေ့လုပ်စားဖြစ်တဲ့ မုန့်ကြာစေ့ လုပ်နည်းလေးကိုပြောပါမယ်
ဆန်မှုန့် ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး တ၀က်
ရေ ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၁ဗူးခွဲ
ဇလုံကျယ်ကျယ် တလုံးထဲမှာ ကောက်ညှင်းမှုန့်နှင့်ဆန်မှုန့်တို့ကိုထဲ့ပြီး ရေကိုနည်းနည်းချင်းထည့်ပြီး မုန့်သား အိလာအောင် နယ်ပေးပါ
ကောက်ညှင်းဆန်နှင့်ဆန်မှုန့်တို့အပေါ်မူတည်ပြီး မုန့်သားအပျော့အမာ ကွဲတတ်တာမို့ ရေကိုနည်းနည်းချင်း ထည့်နယ်ပေးပါ
နာရီဝက်လောက်ပြည့်ပါက မုန့်သားကို နည်းနည်းချင်းယူပြီး ခပ်သေးသေးလေးတွေ လုံးပေးပါ
ရေပွက်ပွက်ဆူတာနဲ့ လုံးထားသော မုန့်လုံးများကို တလုံးချင်း ရေနွေးအိုးထဲကို ထဲ့ပေးပါ
ထန်းလျှက်ရည်ကို ရေ ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူးနှစ်ဗူးသာသာလောက်နဲ့ကျိုပေးပါ
ရေမပျစ်မကျဲ အနေအထားလောက် ရအောင်ကျိုပြီးထားပါ
ရေစစ်ထားသော မုန့်ကြာစေ့ အလုံးလေးများကို ပန်းကန်တလုံးထည့်ပြီး ထန်းလျှက်ရည်လောင်းချပြီး စိမ်ထားပေးပါ
တပွဲစာအတွက် ပန်းကန်ထဲကို မုန့်ကြာစေ့နှင့်ထန်းလျှက်ရည်တို့ကို အနေတော်ထည့်ပြီး အုန်းသီးခြစ်ပြီးသား အနေတော်ဖြူးပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ
Posted by Tuumar at 7:20 pm No comments:
ပုဇွန်ခြောက် ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်း ငပိရည်ဖျော် မွှေးေ...
ပုဇွန်ထုတ်လှော်ထောင်း ငပိရည်ဖျော် မွှေးမွှေးလေး